Posted by ခင်မင်းဇော် at 10:48 PM
ဒီသီချင်းလေး ကျမလည်း တအားကြိုက်တယ်။ ရုပ်မမြင်ရပဲ အသံပဲ နားထောင်ရတာ ပိုကောင်းတယ်။
စိုးရိမ်လို့ ကယောင်ကတမ်းတွေ မက်တာပေါ့ အမရာ
ကျမတော့ ချစ်တတ်တယ် ထင်တယ် ဖတ်သွားတယ်။:)
အမ အားရက်မှာ အချစ်ဝတ္ထုတွေ ရေးဖြစ်နေပြီထင်တာ :) အချစ်ဆိုသည်မှာ ....
စရာတွေ ကြည်းနှုးစရာတွေနဲ့ တွေ့နေတဲ့အချိုန်မှာတော့
စရာတွေနဲ့တွေ့နေတဲ့ အချိုန်ကျပြန်တော့ အချစ်ဆိုတာ
ချစ်ပါတယ်လို့ ပြောခွင့်မရှိတဲ့ အဖြစ်မျိုး(အပျိုလူပျိုဘဝ
မှာ)ကြုံခဲ့ကြဘူးတဲ့ လူအတွက်ကတော့ အချစ်ဆိုတာ.....
နား မလည်ဘူး.. patch work က.. စိပ်လွန်းတယ်။း)
မောင်နဲ့ ဘာကြောင့် သုံလေးငါးနှစ်ဝေးနေရတယ် မောင်နဲ့ပြန်ဆုံ ဖို့.ဘယ်လောက်မျှော်လင့်ခဲ့ရတာတွေ ပါနိုင်ပါသေးတယ်ဗျာ..ဟီး..တကယ်ဆုံတဲ့အခါ အဲ့လိုမဟုတ်လို့တော်သေးတယ်..ကိုစောမိုးကြီးက အဲ့လိုသာဖြစ်လို့ကတော့ အပြင်မှာဆို တေပီ..
မချစ်တတ်ပေမယ့် ခိုးဖတ်သွားပါတယ် ဒေါ်ခင်မင်းဇော်
စ စချင်းတော့ လန့်သွားတာပဲ.. နောက်မှ... အော်..ဒီလိုကိုး...အချစ်ဆိုသည်မှာ...အဲဒီသီချင်းလေးကြိုက်တယ် အစ်မရေ...
မချစ်တတ်ပေမယ့် အချစ်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်တော့ ပေးဖတ်သင့်ပါတယ် ...
ထွန်းအိန္ဒာဗိုလ် ဗားရှင်းတော့ မရှိဘူး။
အမျိုးသမီး အဆိုတော် ပေါင်းစုံ ဆိုထားတဲ့ ဗားရှင်းပဲ ရှိတယ်။
Love is ....Multivitamin.:P
၀တ္ထုလေးထဲ မျောပါသွားလိုက်တာ ကျွန်မတက်ဂ်ထားတာကို ရေးတယ်ဆိုတာ အဆုံးမှ သိတော့တာပဲ မ ရေ… ခုလို ရင်ခုန်လှိုက်မောစရာ အချစ်ဆိုသည်မှာလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ မ ရေ… စကားမစပ်… မ အဲလို အိပ်မက်မက်တတ်လားဟင်…. ကျွန်မမက်တတ်တယ် သိလား… တရေးနိုးမှ ကိုယ့်ဘေးနားမှာ စိတ်ကြိုက်ဟောက်နေတဲ့ မောင့်ကို တွေ့ မှ ဟင်းချမိတယ်… မရယ်နဲ့ နော်မ… အဲဒါအချစ်လေ… ဟုတ်ဖူးလား….
အိမ်မှာ အင်တာနက်ပျက်နေလို့ ကောမန့်တွေ မပြန်နိုင်ဖြစ်ရတယ်။ ခွင့်လွှတ်ကြပါနော်။
တခါတလေ မက်တတ်တဲ့ အိပ်မက်ကို သတိတရအနေနဲ့ စိတ်ကူးတန်ဆာဆင်ပြီး တန်ခူးအတွက် တက်ဂ် ရေးပေးလိုက်တာပါ။ အချစ်ဆိုသည်မှာ လင့်ကို ပေးလာတဲ့ ကဘကိုလဲ ကျေးဇူးပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကိုငှက်ဆိုတာ အကောင်းဆုံးလို့ ကျမလဲ ထင်ပါတယ်။ အိမ်မှာအခွေက ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်ပဲ ရှိလို့ ...